मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा बाबुरामलाई तान्ने तयारी – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा बाबुरामलाई तान्ने तयारी
शनिबार संसदमा सरकारले दुई वर्षमा गरेको उपलब्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मातातीर्थस्थित नेपाल ट्रस्टको १७४ रोपनी जग्गाको छानविन हुने बताए ।
‘केही व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने नियतका साथ ‘नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने अवस्था भयो’ भन्दै २०६९ साल कात्तिक २ गते यस सम्बन्धमा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २ र ३ विपरीत निर्णय भएको देखिन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा भने, ‘जसरी ललितानिवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानबिन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानविन हुन्छ ।’
नेपाल ट्रस्टको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा सार्न आदेश दिनेलाई छानविन गरेर कारवाही गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट कानूनविपरीत निर्णय गरेको भनिएको अवधिमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । भट्टराई १२ भदौ २०६८ देखि ३० चैत २०६९ सम्म प्रधानमन्त्री थिए । भलै, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख गरेनन् ।
के हो मातातीर्थको १७३ रोपनी जग्गा प्रकरण ?
मालपोत कार्यालय, कलंकीले ७ असार २०७० मा नेपाल ट्रस्ट जग्गाधनी रहेको काठमाडौंको मातातीर्थ, महादेवस्थान, थानकोट, सतुंंगल र इचंगुनारायणको जग्गा व्यक्ति (मोही) का नाममा कायम गरेको देखिन्छ ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा साविक थानकोट र महादेवस्थान गाविसमा १०२ रोपनी ३ आना जग्गा मोहीका नाममा कायम भएको थियो ।
त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, बाागमती अञ्चल, काठमाडौंका नाममा रहेका विभिन्न ७८ कित्ता जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ अनुसार ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गामा स्वतः ट्रस्टको हक कायम हुन्छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वदेश तथा विदेश जहाँ जे-जस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भएता पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः ट्रस्टका नाममा हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वतः ट्रस्टको हक कायम भएको मानिनेछ’ ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘…ट्रस्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुनेछैन ।’
प्रधानमन्त्री ओली झुक्किए कि अरु ?
प्रधानमन्त्रीको लिखित सम्बोधन अनुसार मोहीलाई जग्गा वितरण गर्ने निर्णय २०६९ कात्तिक २ गते भएको भनिएको छ । तर, मालपोत कार्यालय, कलंकीले भने २०६९ भदौ २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको ‘निर्णय अनुसार’ भन्दै व्यक्तिलाई जग्गा दिएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा १७४ रोपनी जग्गाबारे छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्ने बताएका छन् । तर, त्यतिबेला १७३ रोपनी पाँच पैसा क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्रै मोही कायम भएको मालपोत कार्यालय, कलंकीका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
२० मंसिर २०६९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित ३५ दिने सूचनामा पनि मन्त्रिपरिषदको भदौकै निर्णय अनुसार भनिएको छ । सार्वजनिक सूचनामा ‘जोताहा/मोही जग्गा कमाउने व्यक्तिले रै. पं (बिर्ता जग्गालाई रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्ने प्रक्रिया) दर्ता माग गरेको, निम्न जग्गा ट्रस्ट र व्यक्तिको नाममा दर्ता भै दोहोरो स्रेस्ता कायम भएकाले दोहोरा स्रेस्ता कट्टा गर्न माग गरी निवेदन प्रस्तुत’ भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई जानाजान गलत ‘रिर्पोटिङ’ गरेको हुन सक्ने मालपोत कार्यालय, कलंकीका ती अधिकारीको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मिति, क्षेत्रफल आदिमा तलमाथि पारेर फेरि चलखेल गर्न खोजेको हुन सक्छ ।’
निर्णय भएकैमा शंका !
मालपोत कार्यालय, कलंकीले ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार’ व्यक्तिका नाममा लालपूर्जा वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, २०६९ मा भएको भनिएको उक्त निर्णयको प्रति भने उपलब्ध नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
१७३ रोपनीभन्दा बढी ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिलाई दिनू भन्ने विषय राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको देखिँदैन । त्यतिमात्रै होइन, निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई र विभागले मातहतका कार्यालयलाई गरेको भनिएको परिपत्र/आदेशपत्र समेत भेटिएको छैन ।
मालपोत कार्यालय, कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत टेकराज अर्याल आफूले यो विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर दुई/तीनपछि प्रतिक्रिया जनाउनेछु ।’